Waxaa loo heli karaa soo dejinta Thunderbird 13 | Laga soo bilaabo Linux
Waxaa loo heli karaa soo dejinta Thunderbird 13
Sidii caadada u ahayd, oo ku xigta bixitaanka Firefox 13, Bilowga nooca isla macmiilka boostada ayaa imanaya Mozilla Thunderbird.
Isbedelada aan ku arki doono qaabkan (waxaa turjumay ragga ka socda Firefoxmania) aad muhiim uma ahan:
Suurtagalnimada dir faylal waaweyn iyo in aysan ka boodin mahadnaqa ay la leeyihiin YouSendIt, hadda feylasha waxaa lagu soo dhejin doonaa adeegga kaydinta khadka tooska ah iyo xiriiriyayaashooda oo loo dirayo asxaabtaada. Wada-hawlgalayaal dheeri ah ayaa lagu dari doonaa sii-deynta mustaqbalka.
Iyadoo lala kaashanayo Gandi iyo Hover, hadda waan awoodnaa saxiix oo hel cinwaan emayl shakhsiyeed oo leh Thunderbird. Cinwaankaaga cusub ee emailka, Thunderbird si otomaatig ah ayaa loo qaabeyn doonaa waxayna diyaar u tahay inay dirto oo hesho farriimo. Waqtigan xaadirka ah waxay la shaqeyneysaa bixiyeyaasha kale si loo daboolo meelo badan oo adduunka ah isla markaana loo bixiyo fursado badan mustaqbalka.
ka shuruudaha ugu yar Nidaamka Windows ayaa hadda ah Windows XP Service Pack 2 ama ka dib.
Dhowr hagaajinta amniga.
Waxaad kala soo bixi kartaa xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxaa loo heli karaa soo dejinta Thunderbird 13
Goormaana Icedove loo cusbooneysiin doonaa laanta imtixaanka?
Waxaa i soo jiitay koontada emailka ee shaqsiga ah waana isku dayay. Sidii aan u maleeyay, waxa ay sameyso Thunderbird waxay ka diiwaangelineysaa degel cusub mid ka mid ah labada bixiye ee aad sheegtay oo aad ku sameysatid koonto emayl ah boggaas. Gandi.net waxay ku kacdaa US $ 15.50 sanadkii, Hover.comna waxay ku kacdaa US $ 20.00.
Waxaan u maleynayaa inay ku fiicnaan doonto kuwa doonaya wax walba otomaatig; In kasta oo, dabcan, in ka yar US $ 10 (oo leh summad xayeysiin ah) waxaad iska diiwaan gelin kartaa domain shirkad si fiican loo yaqaan GoDaddy ama Name.com oo u isticmaal inaad ku sameysato koonto emayl Google Apps iyo tayada Gmail (yaa garanaya waxa ay noqon doonaan kuwa gandi.net iyo Hover.com).
Faa'iidooyinka ay leedahay qaadashada dhibku si aad adigu wax u qabato. 😀
Waxaan isku dayay inaan badalo wakiilka isticmaalaha ee chromium sida aad sheegto laakiin aniga ima aysan shaqeyn, aan aragno hadii qof i caawin karo 🙁
Hello Pan waxaad isticmaali kartaa kordhin
Runta, adeegyada internetka ee hotmail, gmail, iwm. la xiriir bulshada oo diirada saar dhamaan ilahaaga Firefox.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaan rajaynayaa sida May oo kale u waraabiyo is-beddelka cusub ee alaabooyinka ugu caansan ee Mozilla, Australis, si loo hagaajiyo is-waafajinta muuqaalka Thunderbird, oo ah wax dhif iyo naadir ah tan iyo isbeddelkii ugu dambeeyay
Annagu haddaan nahay Solus OS mar hore ayaannu ku haysannaa bakhaarkeenna, halkan waxaan ku sii deynaynaa noocyo cusub oo Firefox iyo Thunderbird ah dhowr saacadood ka dib markii loo soo raro FTP oo ah hal ama laba maalmood ka hor inta aan si rasmi ah loo shaacin.
In Arch Linux waxay sidoo kale horeyba u jirtay ilaa Juun 5. 😛
LDD: Mageia 2 waa la heli karaa
Linus Torvalds vs Gnome kordhinta